एनएलजी ईन्सुरेन्सको नेटवर्थ २३३.७८ ,प्रति शेयर आम्दानी कती जान्नु होस – Palika Express
एनएलजी ईन्सुरेन्सको नेटवर्थ २३३.७८ ,प्रति शेयर आम्दानी कती जान्नु होस
PalikaExpress २९ बैशाख २०७८, बुधबार 450 पटक हेरिएको
एनएलजी ईन्सुरेन्सले चालु आ.व. को तेश्रो त्रैमासिक वित्तिय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यस त्रैमासमा २१ करोड २८ लाख खुद नाफा आर्जन गरेको छ भने गत आ.व. को सोही अवधिमा १५ करोड ७३ लाख कमाएको थियो । तुलनाको अवधिमा खुद नाफा ३५.२२ प्रतिशतले बढेको छ ।
यस अवधिमा कम्पनीले ८५ करोड ३६ लाख खुद वीमाशुल्क आर्जन गरेको छ भने गत आर्थिक बर्षको सोही अवधिमा ६२ करोड ६५ लाख खुद वीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । यस अवधिमा खुद वीमाशुल्क ३६।२५ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । कम्पनीले पुनर्वीमा कमिशन आय २२ करोड ५४ लाख र लगानी, कर्जा तथा अन्य आयबाट ७ करोड २८ लाख अर्जन गरेको छ ।
यस अवधिमा कम्पनीले ३८ करोड १३ लाख खुद दावी भुक्तानी गरेको छ । त्यसैगरी अभिकर्ता कमिशन बापत ५ करोड २१ लाख र व्यवस्थापन खर्च बापत १६ करोड ७६ लाख खर्च गरेको छ । भुक्तानी हुन बाँकी दावी रकम ९८ करोड ९० लाख रहेको छ । कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी २५।८८ रहेको छ भने नेटवर्थ २३३.७८ रहेको छ । त्यसैगरी मुल्य आम्दानी अनुपात ४४.९४ गुणा रहेको छ ।